Danjire Ameeriko Oo Soomaalida Kenya Degan Ugu Baaqay Iney Sharci Qaataan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay Soomaalida aan sharcida heysan ee ku sugan dalkaas in ay qaataan sharciga Kenya, kaddib howlgal ay xalay ciidamadu ku qab-qabteen dad u badan Soomaali, kuwaasi oo qaarkood ku xiran saldhigyada magaalada Nairobi.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Maxamed Cali Nuur “Ameeriko” oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay jiraan Soomaali badan uu ka soo daayay saldhigyada magaalada Nairobi kaddib howlgallo xalay ay ciidamada Kenya ka sameeyeen xaafadda ay Soomaalida u badanyihiin ee Eastliegh, halkaasi oo ay ka qab qabteen tiro dad ah.
Danjire Cali Ameeriko ayaa tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya looga baahanyahay inay qaataan sharciga dalkaasi si ay u yaraadaan howlaha lagu qabqabanayo Soomaalida oo marar badan soo laalaabtay.
“Anagga waxaa naga go’an inaan wax u qabano shacabkeena ku nool Kenya, laakiin waxaa muhiim ah in dhankooda ay ogolaadaan qaadashada sharciyada dalkaasi u degsan, si looga hortaggo in lagu xadgudbo xaquuqdooda, marka waxaan soo jeedineynaa in la qaato sharciga” ayuu yiri danjire Ameriko.
Ciidamada Kenya oo sheegay iney raadinayaan dad ay ku sheegeen argagaxiso ayaa xalaya xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Eastliegh ee magaalada Nairobi.